Ururka Nusoj Oo soo dhaweeyay go’aankii Maxkamada Qaranka DKMG – SBC
Ururka Nusoj Oo soo dhaweeyay go’aankii Maxkamada Qaranka DKMG
Xoghayaha shaqada iyo Shaqaalaha ee Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee Nusoj Md Axmed Maxamuud Maxamed (Axmed Shaam) ayaa Wax lagu farxo ku tilmaamay go’aankii ay maxkamada Qaran DKMG ah ay ku cadeysay Cida sida saxda ah u ah Hogaanka ururka Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj, ka dib baaritaan dheer.
Axmed Shaam ayaa sheegay in tani ay fariin cad u tahay kuwa ku qaraabta beenta iyo iska dhig dhigita wax aysan aheyn, isagoona intaasi raaciyay in ay midani noqoneyso mid cadeeyneysa wadajirka iyo isku duubnaanta Saxafiyinta Soomaaliyeed.
Xogyahaha Shaqada iyo Shaqaalaha Ururka Nusoj oo maanta wareysi gaar ah siiyay SBC ayaa ugu baaqay in ay ka waantoobaan dadka iyagu isku dayay in ay qaab qaldan u adeegsadaan magaca Ururka, dhaawacna u geystaan sharafta iyo muunada ay leedahay Saxaafada Soomaaliya .
Waxaa uu markale aad ugu mahadceliyay Axmed Shaam maxkamada Qaranka Soomaaliyeed oo uu ku tilmaamay go’aanka ay gaartay mid dhaxal gal ah islamarkaana soo ay ka go’am tahay ururka Nusoj u adeegitaanka saxaafada Soomaaliyeed .
Maxkamada ayaa kadib markii ay dhageysatay,baaritaana dheer ku sameysay arintaan ayaa 15-kii bishaan ku dhawaaqday in Gudoomiyaha Ururka NUSOJ uu yahay C/risaaq Cumar Ismaacil (Sheekhaduun) iyo Xogheyaha guud ee Ururka uu yahay Cumar Faaruuq Cismaan.
Tani waxay ku soo aadeysaa xili ay jireen mudooyinkii ugu dambeeyay dad iyagu sheeganaya in ay majaraha u hayaan ururka Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj, sidaa daraadeed waxa uu hadalkiisa ku soo koobay Warxumow lagu waaa.